Vhesi reBhaibheri Unofanira Kunamata Napo Paunenge Uchida Kupora | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Mavhesi eBhaibheri 10 Vhesi reBhaibheri Unofanira Kunamata Napo Paunenge Uchida Kuporeswa
Nhasi tichange tichishanda nendima dzeBhaibheri gumi dzaunofanira kunamata nadzo kana uchida Kuporesa. Izwi raMwari ndiro simba ratinovimba naro. Kuziva izvi kunotipa iyo yakasarudzika mhando yekuvimba kana isu tiri kutyisidzirwa nehurwere, munhu kana mweya. Chinyorwa chakataura kuti ndiani anotaura uye zvinoitika kana Mwari asina kutaura? Mwari ega ndiye Mwari uye Mazwi ake anoshanda. Haazi murume anonyepa uye haasi iye mwanakomana wemunhu kuti atendeuke.
Paunonamatira kurapwa, zvakakosha kuti unamate neshoko raMwari. Izvo hazvingoite chete kuti kurapa kuita kukurumidza, zvinotipawo chivimbiso chekuti tichaporeswa nesimba raMwari. Kana iwe urikunamatira kupora, heino gumi mavhesi eBhaibheri iwe aunofanira kunamata nawo:
Uye Mwari uchapusika misodzi yose kubva pameso avo; nerufu haruchazovipo, kana kushungurudzika, kana kurira, kana kurwadziwa hazvingavipo; nekuti zvekutanga zvapfuura.
Mwari akavimbisa kupukuta misodzi kumeso kwedu. Kurwara kunogona kuunza misodzi isingaperi nekuda kwekurwadziwa. Kurwara kunogona kuunza rufu. Asi Mwari akavimbisa kubvisa misodzi nerufu. Namata neiyi ndima kuti upore. Shandisa shoko raMwari, Anokudza shoko rake.
Tarira, ndichauya nahwo noutano, uye ndichavaporesa; ndichavaratidza rugare rwakawanda nezvokwadi yakawanda.
Sei uchirwira kuti uwane kupora asi Mwari vakachigadzirira izvozvi. Iyi isungano yekurapa iyo Mwari yaakatiitira isu vanhu vake. Zvese zvatinoda kuti tiite kiyi yesungano. Ndichaunza hutano nekupora uye ini ndichavaporesa. Akavimbisa kutirapa kubva kuzvirwere zvemarudzi ese. Namatira kupora nerugwaro urwu.
Mapisarema 103: 1-5
Rumbidza Jehovha, mweya wangu; Nezvose zviri mukati mangu, ngazvirumbidze zita rake dzvene. Rumbidza Jehovha, mweya wangu, Urege kukangamwa mikomborero yake; Iye, anokangamwira zvakaipa zvako zvose; unoporesa kurwara kwako kose; Iye anodzikunura hupenyu hwako pakuparadzwa; anokushongedza korona younyoro netsitsi. Anogutisa muromo wako nezvinhu zvakanaka; saka hujaya hwako hunovandudzwa segondo.
Chinyorwa chino chinoita kuti tinzwisise kuti Mwari vanogara mukati mokurumbidza kwevanhu Vavo. Paunenge uchirwara, rumbidza Mwari nekuporeswa. Ropafadzai zita reMutsvene weIsreal nerugwaro urwu uye mirira kuti kupodzwa kwako kuuye.
Ndiporesei Jehovha, ipapo ndichaporeswa; ndiponesei, ipapo ndichaponeswa; nekuti ndimi wandinorumbidza.
Namatira kupora nerugwaro urwu. Kumbira kupodzwa. Chimwe chikonzero vanhu vazhinji vachiri kuneta mumarwadzo ekurwara ndechekuti vakaramba kukumbira Mwari kupodzwa. Chinyorwa chinoti kumbira uye uchapihwa. Kana iwe uchirwara, usango gara pasi uye kutarisira kupora kunoshamisa kuti kuuye, iwe unofanirwa kuchikumbira. Namata kuna Mwari kuti Upore nerugwaro urwu uye utarisire chishamiso chako.
Ndikati, Kana uchiteerera zvakanaka inzwi raJehovha Mwari wako, ukaita zvakanaka pamberi pake, ukateerera mirairo yake, nokuchengeta mirau yake yose, handingaisi kunyange chimwe chezvirwere izvi Uyo wandakauyisa pamusoro pavaEgipita; nekuti ndini Jehovha unokuporesa.
Kana kutambudzika kukakwira kuvanhu, iwe unofanirwa kuyeuchidza Mwari kuti Vakavimbisa kusaisa chero hosha kana chirwere pauri neveimba. Izwi rinoti kana iwe ukateerera kuzwi raIshe ukaita zvakanaka pamberi pake, anokuregedza kubva kumatambudziko anotyisa anokanganisa vanhu.
Ekisodho 23: 25
Shumira Jehovha Mwari wako, kuti aropafadze chingwa chako nemvura yako; uye ndichabvisa urwere pakati pako.
Usaende uchitsvaga kurapwa uko pasina. Chinyorwa chakataura kuti kana ukashumira Jehovha Mwari wako, uye acharopafadza chingwa chako nemvura yako; uye bvisa urwere pakati pako. Mwari akavimbisa kuita izvi, namatira kuratidzwa kweichi vimbiso muminamato yako.
2 Makoronike 7: 14
Kana vanhu vangu, vakatumidzwa zita rangu, vachizvininipisa, nokunyengetera nokutsvaka chiso changu, nokurega nzira yavo yakaipa; ipapo ndichanzwa kudenga, ndikavakangamwira zvivi zvavo, nokuporesa nyika yavo.
Paunenge uchida kupodzwa kwenyika kana nharaunda kwaunogara, shandisa chinyorwa ichi kunamatira. Ichi chivimbiso chinobva kuna Mwari. Kana vanhu vangu vakadamwa nezita rangu vakazvininipisa, vakanyengetera nekutsvaka chiso changu, vakatendeuka panzira dzavo dzakaipa; ipapo ndichanzwa kudenga, ndichiregerera zvivi zvavo, nokuporesa nyika yavo. Nyika yedu ichaporeswa muzita raJesu.
Asi iwe ndichakumutsiridza, uye ndichakuporesa mavanga ako, ndizvo zvinotaura Jehovha.
Maronda ako achaporeswa uye hutano hwako huchagadziriswa. Ichi chivimbiso chinobva kuna Mwari. Akavimbisa kudzorera hutano hwedu uye kuporesa maronda edu. Tinofanira kugara tichifunga zvakavimbiswa naMwari patinonamata. Tinonamata kuna Mwari tichishandisa mazwi avo nezvipikirwa.
Anopa simba kune vasina simba, uye kune avo vasina simba anowedzera simba… avo vanomirira Jehovha vachawana simba idzva; vachabhururuka namapapiro samakondo, vachamhanya vasinganeti, vachafamba vasingaziyi. ”
Paunenge usina kusimba uye simba rako richikundikana, namatira simba. Chinyorwa chinoti avo vanomirira pana Ishe vachavandudza simba ravo. Simba rako haripere iwe muzita raJesu.
Iye pachake akatakura zvivi zvedu mumuviri wake pamuti, kuti isu tife kuzvivi uye tiraramire kukururama. Nemavanga ake makaporeswa. ”
Kunyangwe kurwara uku kusati kwatanga, Kristu akarapa zvese zvedu zvirwere. Rugwaro rwacho rwakati atora paari hutera hwedu hwese uye akarapa zvirwere zvedu zvese. Namatira kupora nekukurumidza.
Ndinoraira sechirevo chaMwari, apo iwe unoshandisa rimwe kana maviri eaya magwaro kunamatira, kupora nekukurumidza kunouya kwauri muzita raJesu. Ndinoraira nesimba rematenga, yako kurwara achabviswa muzita raJesu.
Previous nyaya5 Ndima yeBhaibheri Unofanirwa Kuziva Nemusoro uye Sei
inotevera10 Ndima yeBhaibheri Unofanirwa Kuziva Kana Uchinamatira Tsitsi